“Vondrona Antanimena” : “Mba ho ny tombontsoam-bahoaka hatrany…” | NewsMada
“Vondrona Antanimena” : “Mba ho ny tombontsoam-bahoaka hatrany…”
Mby aiza ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny? Maneho ny fijeriny ny “Vondrona Antanimena” nikarakara fihaonambe momba ny fampihavanana sy fanorenana ifotony, ny taona 2014.
“Ny tombontsoa ambonin’ny vahoaka malagasy no tokony hifantohan’ny sain’ny mpitondra fanjakana na aiza na aiza misy azy, amin’ny fandraisany andraikitra eo amin’ny asa fampandrosoana an’i Madagasikara. Asa vadidrano ny asa fanompoana ny firenena ka tsy vita raha tsy ifanakonana”, hoy ny mpandrindra ny “Vondrona Antanimena”, nikarakara fihaonambe momba ny fampihavanana sy fanorenana ifotony teny Antanimena, ny taona 2014, Rakotomavo José.
Tsy tokony hitarain-tana-miempaka ireo ambaratonga samihafa fa handray anjara amin’ireo asa tandrify azy ireo avy: ny filohan’ny Repoblika, ka hatrany amin’ny praiminisitra sy ny governemanta, ny parlemantera… Torak’izany koa ny vahoaka manontolo, tsy ho lasa mpitazam-potsiny, araka ny nambarany.
Tamin’ny alàlan’ny fifidianana no nahavoafidy ny filoha. Tamin’izany fotoana izany no nampisehoana teo imason’ny vahoaka ny fandaharanasa mitondra ny anarana hoe “Fisandratana”, narafitra sy natolotra ho an’ny mpifidy entina hanatsarana ny fiainam-bahoaka ka nahalany azy ary nahazoan’ny filoha zo hitondra ny firenena.
Mila filaminana i Madagasikara
“Avy amin’ny vahoaka ny fahefana, rariny sy hitsiny raha entina hanatsarana ny fiainam-bahoaka ny ankapoben’ny tombontsoa avy amin’izany ary hitobaka ka ho hita taratra amin’ny fiainan’ny tsirairay”, hoy izy. Na eo aza ny fahasahiranana ara-toekarena maneran-tany manasarotra ny fitantanana ny toe-draharaham-panjakana, ary nanampy trotraka ny Covid-19, tsy maintsy ekena fa misy ireo vokatry ny ezaka amin’ny fanatanterahana io fandaharan’asa io.